Ny 4 safidy tsara indrindra amin'ny Tinder ho an'ny telefaona Android | Androidsis
Ny 4 safidy tsara indrindra amin'ny telefaona Tinder for Android
Aaron Rivas | 12/09/2021 10:06 | Fampiharana Android, Finday
Tinder Izy io dia iray amin'ireo sehatra sy fampiharana fampiasa indrindra ary alaina ho an'ny fampiarahana, raha tsy hilazana fa laharana 1 io sokajy io. Ity fampiharana ity dia mety tsara amin'ny fitadiavana mpiara-miasa, fihaonana amin'olona, ​​fihaonana amin'ny olom-baovao ary, maninona ary? Na dia mitady vady na fanambadiana aza. Izy io dia rindrambaiko mampiaraka malaza be izay, soa ihany fa misy amin'ny telefaona Android.
Na izany aza, tsy izy irery no iray karazana aminy; Misy safidy maro hafa amin'ny Tinder izay mitovy ary, ho an'ny maro, tsara kokoa. Izany no antony hitondranay lisitra eto ambany Ny 4 safidy tsara indrindra amin'ny Tinder for Android. Azo maimaim-poana ny rehetra ary azo jerena ao amin'ny Android Play Store. Ankoatr'izay, izy ireo dia iray amin'ireo isa ambony indrindra ao amin'ny magazay sy ireo manolotra fiasa sy fiasa mahaliana indrindra.
Etsy ambany no hahitanao andiana safidy hafa amin'ny Tinder ho an'ny finday avo lenta Android. Tsara homarihina, toy ny fanaontsika hatrany, izany maimaim-poana daholo ireo ho hitanao amin'ity lahatsoratra fanangonana ity. Noho izany, tsy mila mandoa vola ianao raha te hahazo ny iray na izy rehetra.
Na izany aza, iray na maromaro dia mety manana rafitra mikrôpôment anatiny, izay mamela ny fidirana amin'ny endri-javatra premium sy ny fidirana amin'ny endri-javatra maro hafa, ankoatry ny zavatra hafa. Toy izany koa, tsy ilaina ny mandoa vola fa ilaina ny mamerina azy. Ny zavatra iray hafa dia ny maro amin'ireo fampiharana ho hitanao eto dia manana asa fandefasana hafatra eo noho eo ary / na manana kalitao amin'ny media sosialy, ka mihoatra ny iray no ho fantatrao. Eny eny, andao hanatona azy.
1 Lalao W-Match: Chat, Meet & Flirt
2 Badoo - Fampiharana mampiaraka sy mampiaraka
3 Fiesta nataon'i Tango: Mifanerasera amin'ny olona ary mahazo namana vaovao
4 Chat sy daty: mampiaraka tsotra amin'ny olona
Lalao W-Match: Chat, Meet & Flirt
Mba hanombohana ity lahatsoratra fanangonana ireo fampiharana sy safidy tsara indrindra ho an'ny telefaona Tinder ho an'ny Android amin'ny tongotra ankavanana ity dia manana isika Fifaninanana, fampiharana malaza be ao amin'ny Play Store izay efa manana fisintomana mihoatra ny 10 tapitrisa.
Izy io dia mety tsara amin'ny filalaovana olona an'arivony, na avy amin'ny faritra misy anao na avy amin'ny toerana lavitra kokoa. Ny chat-ny dia ahafahanao mifanerasera amin'ny fomba arivo sy iray, noho izany dia mety ny manomboka resadresaka mahaliana ary avelao ny zava-mitranga rehetra tokony hivezivezena sy ho lasa casanova feno.
Ny fandidiana azy dia tena mitovy amin'ny an'ny TinderKa raha efa nampiasa Tinder ianao dia azo antoka ao anatin'ny segondra vitsy sy minitra vitsy dia efa hainao ny mampiasa W-Match manomboka amin'ny loha ka hatramin'ny tongotra, toy ny hoe efa nampiasainao teo aloha. Azonao atao ny mampiasa azy handefasana stickers sy emoticons izay hampisy fihetseham-po sy fahatsapana amin'ny resaka, amin'izay hahatonga azy ireo hahaliana kokoa, hahafinaritra kokoa ary hihena kokoa. Mazava ho azy, alohan'ny hiresahana amin'ny olona iray dia afaka mahita famaritana fohy momba ny persona ianao mba hahafahanao misoroka ny fanaovana jamba sy ny fananana hevitra mialoha.
Lalao W-Match: Horonan-tsary sy fiarahana mampiaraka
Badoo - Fampiharana mampiaraka sy mampiaraka
Na dia apetratsika ho faharoa aza izany dia azo atao fa, aorian'ny Tinder, no fampiharana malaza sy be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny fiarahana sy filalaovana olona avy amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao.
Badoo dia safidy tsara indrindra izany, noho ny antony mazava, dia tsy ho diso amin'ity lisitra ity. Miaraka aminy ianao dia afaka milalao, manambola ary mifanerasera am-pitiavana sy amin'ny tanjona hafa. Ny tena fampiasana azy dia ny mitady olona hihaona sy hivoaka, koa raha mpitovo ianao na mpitovo, dia mety ilay fampiharana manampy anao hahita ny tena fitiavanao alohan'ny tara loatra ary, amin'ity fomba ity, afaka mahazo ilay fahasambarana ianao.
Miresaha amin'ilay zazavavy na zazalahy tianao ary zarao ny zava-drehetra momba ny fialamboly, fialamboly, zavatra tianao, mahaliana, lohahevitra resaka ary maro hafa, mba hahafantaranao tanteraka ny tsirairay ary hiroso amin'ny dingana manaraka. Na izany aza, io ihany koa no azo anaovana namana; Omenao azy ny fampiasana sy ny tanjona tianao, tsy misy fanoloran-tena.
Swip, match and chat. Io dia mavitrika mitovy amin'ny Tinder sy ny ankamaroan'ny fampiharana mampiaraka. Ka azo antoka fa fantatrao ny interface. Amboary ny piraofilinao mba hiseho ho mahaliana sy mahaliana, ary ho hitanao ny fomba hanananao tolo-kevitra marobe sy olona maniry hiresaka aminao amin'ny zavatra tsy misy dikany. Azonao atao koa ny miresaka amin'ny alàlan'ny antso an-tsary raha tianao; Badoo dia safidy feno tsara.
Ny iray amin'ireo mampiavaka azy indrindra dia misy ifandraisany amin'ny fiarovana sy atiny mora tohina. Baddo dia mizaha sary mazava alohan'ny hanokafany azy ary mampiseho fampitandremana momba ny atiny, mba hisorohana ny fahasosorana ... Maherin'ny 100 tapitrisa ny olona no naka izany avy amin'ny Google Play Store ho an'ny telefaona Android.
Badoo - Mifankatia sy mampiaraka
Fiesta nataon'i Tango: Mifanerasera amin'ny olona ary mahazo namana vaovao
Mandroso amin'ny safidy fahatelo mankany Tinder, dia hitantsika Fiesta nataon'i Tango, fampiharana iray izay mirehareha amin'ny vondrom-piarahamonina somary lehibe sy midadasika noho izy mirehareha amin'ny fisintomana mihoatra ny 5 tapitrisa ao amin'ny Google Play Store.
Koa tonga lafatra amin'ny filalaovana fitia sy fihaonana amin'ny olona vaovaoNa mba hiresahana tsindraindray fotsiny na hahitana namana vaovao, fiarahana na vady. Na dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny Tinder sy ireo fampiharana teo aloha aza efa nofaritana, fantatra amin'ny anarana hoe tambajotra mampiaraka sosialy. Noho izany, izy koa dia manana ny sehatra fifampiresahana ahafahanao mamorona sy mampitombo resaka eo amin'ireo mpampiasa izay nifankatia tamin'ny alàlan'ny fampiharana.
Azonao atao ny manaraka ny olona manintona anao, mijery ny piraofiliny ary milalao miaraka amin'izy ireo, raha tianao. Tena mahaliana izy io.
Developer: Hey fety
Chat sy daty: mampiaraka tsotra amin'ny olona
Mba hamaranana dia manana isika Chat sy daty, fampiharana hafa tsara hihaonana amin'ny olona sy ny filalaovana fitia. Miaraka amin'izany dia azo atao ny mihaona amin'ny olona ao amin'ny faritra misy anao, noho izany dia lavorary raha te hiala amin'ny fahazarana ianao ary hihaona amin'ireo namana na fitiavana vaovao, mba hampitomboana ny fiainam-piarahamoninao ary hampivily ny sainao mandritra ny fotoana mahafinaritra anao trano fisakafoanana na fisotroana sasany.
Ny iray amin'ireo mampiavaka azy indrindra dia misy ifandraisany amin'ny profil voamarina. Azonao atao ny misafidy "miresaka amin'ireo mombamomba voamarina" hiresahana amin'ny olona tena izy ary hialana amin'ny fisolokiana mampiaraka.
Developer: SA TSY voafetra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny 4 safidy tsara indrindra amin'ny telefaona Tinder for Android
Ny lalao baolina kitra bighead 5 tsara indrindra ho an'ny Android
Fampiharana famakiana barcode 5 ambony ho an'ny Android